ကနျြးမာရေးဓာတျစာအဖွဈ စားသုံးနိုငျသော ကွှကျနားရှကျမှိုသုပျ - Property Knowledge in Myanmar | iMyanmarHouse.com
ကနျြးမာရေးဓာတျစာအဖွဈ စားသုံးနိုငျသော ကွှကျနားရှကျမှိုသုပျ
5 Feb 2021 12:46 pm တှငျ တငျခဲ့သညျ
972 ကွိမျ ကွညျ့ရှု့ပွီး
ကနျြးမာရေးအနဖွေငျ့ ကယျလိုရီပါဝငျမှုနညျးသောကွောငျ့ သှေးတှငျးသကွားဓာတျကိုမတကျစနေိုငျပါ။ ထိုကွောငျ့ ဆီးခြိုသမားမြားစားသုံးရနျ သငျ့တျောပါသညျ။ အစားရှောငျပွီး ဝိတျခလြိုသူမြားအတှကျ အကောငျးဆုံးမှိုလညျးဖွဈသညျ။ အမြှငျဓာတျကွှယျဝစှာ ပါဝငျသောကွောငျ့ အူမကွီးဆိုငျရာရောဂါမြားမဖွဈအောငျလညျး ကာကှယျပေးနိုငျသညျ။ ကငျဆာကြိတျမြား မဖွဈအောငျလညျး ကာကှယျပေးနိုငျပွီး သှေးတှငျးကိုလတျစထရောနှငျ့ ခန်ဓာကိုယျအတှကျ အကြိုးမဖွဈသော အဆီမြားကိုပါကဆြငျးစနေိုငျပါသညျ။
မွနျမာနိုငျငံတှငျ ကွှကျနားရှကျမှိုခွောကျကို ကွာဆံဟငျးခါးခကျြရာတှငျသာ တှငျတှငျကယျြကယျြ အမြားဆုံးအသုံးပွုသညျကိုတှရှေိ့ရပါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ တခွားနညျးလမျးနှငျ့လညျး ကနျြးမာရေးအတှကျ အထောကျအကူပွုသညျ့ ကွှကျနားရှကျမှိုကို စားသုံနိုငျကွောငျး သိရှိစလေိုသညျ့အတှကျ ကွှကျနားရှကျမှို သုပျနညျးကို ရေးသားပေးလိုကျပါတယျရှငျ့။
- အခွောကျခံထားတဲ့ ကွှကျနားရှကျမှိုမဟုတျပဲ အပငျက လတျလတျဆတျဆတျ ခူးထားတဲ့မှိုအစိုလေးကို သုပျစားလို့ရပါတယျ။
- ပထမဆုံးအနနေဲ့မှိုထုပျက ခူးလာတဲ့မှိုကို ရနောရီဝကျခနျ့ စိမျထားရပါမယျ။.
- စိမျထားတုနျးမှာ ကွကျသှနျနီ၊ ငရုတျသီးစိမျးကို ပါးပါးလှီးထားပါ နံနံပငျ ကွိုကျလြှငျသုံးနိုငျပါတယျ။
- ကွကျသှနျဖွူ အမှာကွီး၂မှာကိုဆီခကျြလုပျဖို့ ပါးပါးလှီးပါ၊ ဆီသတျပါ၊ ဝါခငျြပါကနနှငျးထညျ့ပါ မဝါခငျြပါက မထညျ့လညျးရပါသညျ။ မွပေဲလှျောထောငျးထားပါ။
- အကုနျပွီးပါက ရနှေေးတညျပါ ပှကျလာပါက မှိုကို ၃မိနဈ လောကျထညျ့ပွုတျပွီး ပွနျဆယျပါ။ ရခေဲရနှေငျ့ ပွနျစိမျပါ ရိုးရိုးရအေေးနှငျ့စိမျလညျးရပါတယျ။
(မှတျခကျြ- ရအေေးပွနျစိမျခွငျးမှာ မာမာထုတျထုတျလေးဖွဈနစေရေနျဖွဈသညျ။)
- မှို ရစေိမျပွီးပါက ရစေဈပွီး အနတေျောလေးညှပျပါ။
- နောကျဆုံးမှာ မှိုညှပျထားတာရယျ ကွကျသှနျပါးပါးလှီးထားတာရယျ ငရုတျသီးစိမျးရယျကို ပနျးကနျးထဲထညျ့ပါ။ ဆား (သို့) ငံပွရညျနှငျ့မွပေဲဆံထောငျးထားသညျကိုထညျ့ပါ။
- ဆီခကျြထညျ့ပါ သံပုရာသီးညှဈထညျ့ပါ။
- အကုနျလုံး ရောနယျလိုကျပါ....ပဲမှုနျ့ကွိုကျလြှငျထညျ့လို့ရပါသညျ...
ဒါဆိုရငျ အရသာရှိတဲ့ကွှကျနားရှကျမှိုသုပျလေး ရပါပွီ။....
သတျသတျလှတျသမားတှအေတှကျ ငံပွာရညျအစား ဆားနဲ့သုပျစားရငျ သတျသတျလှတျ အသုပျတမြိုးရပါတယျရှငျ့..
ကွှကျနားရှကျမှို အစိုမရှိလညျး မှိုခွောကျကို ၃နာရီလောကျ ရစေိမျ နညျးနညျးကွာကွာပွုတျပွီး ရအေေးထဲပွနျစိမျပွီး သုပျစားလို့ရပါတယျရှငျ့.....
ကဲ အရသာရှိပွီး အာဟာရဖွဈကာ ကနျြးမာရေးအထောကျအကူပွုတဲ့ မှိုသုပျ (salad) သုပျစားကွညျ့ကွရအောငျနျော....
ကျန်းမာရေးဓာတ်စာအဖြစ် စားသုံးနိုင်သော ကြွက်နားရွက်မှိုသုပ်
ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် ကယ်လိုရီပါဝင်မှုနည်းသောကြောင့် သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကိုမတက်စေနိုင်ပါ။ ထိုကြောင့် ဆီးချိုသမားများစားသုံးရန် သင့်တော်ပါသည်။ အစားရှောင်ပြီး ဝိတ်ချလိုသူများအတွက် အကောင်းဆုံးမှိုလည်းဖြစ်သည်။ အမျှင်ဓာတ်ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်သောကြောင့် အူမကြီးဆိုင်ရာရောဂါများမဖြစ်အောင်လည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။ ကင်ဆာကျိတ်များ မဖြစ်အောင်လည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး သွေးတွင်းကိုလတ်စထရောနှင့် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အကျိုးမဖြစ်သော အဆီများကိုပါကျဆင်းစေနိုင်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကြွက်နားရွက်မှိုခြောက်ကို ကြာဆံဟင်းခါးချက်ရာတွင်သာ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အများဆုံးအသုံးပြုသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ ထို့ကြောင့် တခြားနည်းလမ်းနှင့်လည်း ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူပြုသည့် ကြွက်နားရွက်မှိုကို စားသုံနိုင်ကြောင်း သိရှိစေလိုသည့်အတွက် ကြွက်နားရွက်မှို သုပ်နည်းကို ရေးသားပေးလိုက်ပါတယ်ရှင့်။
- အခြောက်ခံထားတဲ့ ကြွက်နားရွက်မှိုမဟုတ်ပဲ အပင်က လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ခူးထားတဲ့မှိုအစိုလေးကို သုပ်စားလို့ရပါတယ်။
- ပထမဆုံးအနေနဲ့မှိုထုပ်က ခူးလာတဲ့မှိုကို ရေနာရီဝက်ခန့် စိမ်ထားရပါမယ်။.
- စိမ်ထားတုန်းမှာ ကြက်သွန်နီ၊ ငရုတ်သီးစိမ်းကို ပါးပါးလှီးထားပါ နံနံပင် ကြိုက်လျှင်သုံးနိုင်ပါတယ်။
- ကြက်သွန်ဖြူ အမွှာကြီး၂မွှာကိုဆီချက်လုပ်ဖို့ ပါးပါးလှီးပါ၊ ဆီသတ်ပါ၊ ဝါချင်ပါကနနွင်းထည့်ပါ မဝါချင်ပါက မထည့်လည်းရပါသည်။ မြေပဲလှော်ထောင်းထားပါ။
- အကုန်ပြီးပါက ရေနွေးတည်ပါ ပွက်လာပါက မှိုကို ၃မိနစ် လောက်ထည့်ပြုတ်ပြီး ပြန်ဆယ်ပါ။ ရေခဲရေနှင့် ပြန်စိမ်ပါ ရိုးရိုးရေအေးနှင့်စိမ်လည်းရပါတယ်။
(မှတ်ချက်- ရေအေးပြန်စိမ်ခြင်းမှာ မာမာထုတ်ထုတ်လေးဖြစ်နေစေရန်ဖြစ်သည်။)
- မှို ရေစိမ်ပြီးပါက ရေစစ်ပြီး အနေတော်လေးညှပ်ပါ။
- နောက်ဆုံးမှာ မှိုညှပ်ထားတာရယ် ကြက်သွန်ပါးပါးလှီးထားတာရယ် ငရုတ်သီးစိမ်းရယ်ကို ပန်းကန်းထဲထည့်ပါ။ ဆား (သို့) ငံပြရည်နှင့်မြေပဲဆံထောင်းထားသည်ကိုထည့်ပါ။
- ဆီချက်ထည့်ပါ သံပုရာသီးညှစ်ထည့်ပါ။
- အကုန်လုံး ရောနယ်လိုက်ပါ....ပဲမှုန့်ကြိုက်လျှင်ထည့်လို့ရပါသည်...
ဒါဆိုရင် အရသာရှိတဲ့ကြွက်နားရွက်မှိုသုပ်လေး ရပါပြီ။....
သတ်သတ်လွတ်သမားတွေအတွက် ငံပြာရည်အစား ဆားနဲ့သုပ်စားရင် သတ်သတ်လွတ် အသုပ်တမျိုးရပါတယ်ရှင့်..
ကြွက်နားရွက်မှို အစိုမရှိလည်း မှိုခြောက်ကို ၃နာရီလောက် ရေစိမ် နည်းနည်းကြာကြာပြုတ်ပြီး ရေအေးထဲပြန်စိမ်ပြီး သုပ်စားလို့ရပါတယ်ရှင့်.....
ကဲ အရသာရှိပြီး အာဟာရဖြစ်ကာ ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြုတဲ့ မှိုသုပ် (salad) သုပ်စားကြည့်ကြရအောင်နော်....
တိုကျခနျးလေး ဈေးလြော့ ရောငျးပါ့မယျ။
တိုကျခနျးအရောငျး ၇ ရပျကှကျ ၊ ရာဇာဓိရာဇျ (၂၃) လမျး၊...
၁၂ လုံးတနျးအနီး တိုကျခနျးငှားမညျ
စမ်းချောင်း ဇလွန်လမ်း ပထမထပ် (14x63) fully furnished ငှါးမည်။
စမျး​ခြောငျး၊ ပွညျသူ့ ၂လမျး၊​မွညေီ ၁၂×၅၀ ပေ၊ ငှား...